zkipster: Xalka Liiska Martida ee Dhacdooyinka iyo Shirarka | Martech Zone
Fiidkii kale ayaan hubiyay dhacdada. Waxay ahayd qabanqaabada caadiga ah… dadka yar ee maamulka ah ee ku mashquulsan inay magacayga ka hubiyaan liiska kaqeybgaleyaasha ee daabacan oo dhowr bog ah. Qaadashada daqiiqado yar oo aad ku dhex mari karto, ugu dambayntii waxay helayaan magacayga oo iska hubinayaan - ka dibna midba midka kale u sheegayo si ay dhammaantood iska hubiyaan. Dhacdooyinka waaweyn ee aan tago, jeegaga ayaa loo qoraa… K-na had iyo jeer waxay u muuqdaan khadadka ugu dheer! Dadka waawayn ee dhamaadka alifbeetada safar sax ah gudaha.
Waxaan jecelahay inay jiraan dad adduunka ku nool oo aaminsan inay kuwani yihiin dhibaatooyinka si fudud wax looga qaban karo tiknoolajiyadda. Dadku at xikmad taasi waa ay sameysay, iyada oo la dhisayo barnaamij daruur ah oo loogu talagalay kiniiniyada iyo taleefannada casriga ah ee u oggolaanaya shaqaalaha munaasabadda in ay si fudud u helaan oo u hubiyaan ka soo qaybgalayaasha Qof kasta oo hubiya dadka waawayn ayaa si otomaatig ah loo cusbooneysiiyaa maxaa yeelay dhammaantood waxay ka shaqeeyaan isla barnaamijka.
Intaa waxaa sii dheer, waxay leeyihiin shey dheeri ah oo ka caawiya ka hortagga khiyaanooyinka inay ku soo dhex dhuuntaan dhacdooyinkaaga. Sawirradu waxay kuxiran yihiin liistada kaqeybgaleyaasha si aad u xaqiijiso iyaga markay hubinayaan dhacdada. Xitaa waad heli kartaa nidaamka diro digniino marka kaqeybgalayaasha VIP yimaadaan. Fikrad fiican!
Tags: liiska kaqeybgalayaashaliiska martidaxikmad